Iskahorimaadyo dhexmara ciidamada qalabka sida ee fadhiya Suudaan - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Iskahorimaadka ka dhex socda ciidamada qalabka sida ee fadhiya Suudaan
Iskahorimaadka ka dhex socda ciidamada qalabka sida ee fadhiya Suudaan
Dibad-baxayaashu waxay ka qaxeen gaaska qayilaadda Axadda, dibna loo soo celiyay habeenkii.
Afhayeenka Ciidamadda Militariga ee Dowladda Kmg ah ee Soomaaliya Col. Cyrus Oguna, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Ciidamadda Militariga ee Dowladda Itoobiya ay kaabiga ku hayaan Magaalada Kismaayo ee Xaruunta Gobolka Jubbada Hoose.
Askariyayaashu waxay isku dayeen in ay ka cararaan gaasaska gaaska dadka da'da yar, habeenkii labaad ee mudaharaadkii furitaanka ahaa oo ku baaqayay in is casilo Madaxweyne Cumar al-Bashir.
Dibad-baxayaashu waxay u doondoonayeen hoyga dhismaha dhul-beereedka, markhaati ayaa sheegay, inkasta oo ay jirto xiisad u dhexaysa ciidamada qalabka sida.
Mr. Bashir hore, waxay diideen inay ku baaqaan dawlad ku meel gaar ah.
Mid ka mid ah malleeyshiyaadka ayaa u sheegay barnaamijka BBC Newsday in tiro gaadiidka gawaarida ah ay yimaadeen iyo bilaabeen in ay gaas gureeyaan oo ay ku noolaadaan kumanaan qof oo ku nool caasimadda Sudan.
Waxay sheegtay in ciidanku uu markii hore ahaa mid dhexdhexaad ah, balse kadib wuxuu isku dayay in uu ka saaro ciidamada ammaanka.
Ciidamada ammaanka lama yaqaan, laakiin BBC-da Tifaftiraha BBC-da Fergal Keane ayaa sheegaysa in macluumaadka da'da ay ku jiraan
Markhaatiga ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ku soo noqdeen weerarkii labaad oo ay dadku u ordeen meel ay ku yaallaan goob badda ah si ay isaga ilaaliyaan dabka dheeraadka ah.
Gaadhi ciidan ayaa dhex maraya dibad-baxayaasha meel u dhow xarunta ciidamada ee subaxnimadii Isniintii.
Cali Ibrahim oo ah Ururka Xirfadlayaasha Suudaan (SPA), oo abaabulay mudaaharaad, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee EFE in cutubyada millatariga ay hawada ku tuureen si ay uga hortagaan ciidamada ammaanka inay kala diraan goobta. in.
Macluumaadka aan la xaqiijin ayaa la soo sheegay. dhibanayaasha goobta. Fiidiyowga warbaahinta bulshada ayaa muujiyay in mudaaharaadayaashu ay isku qarinayaan derbi markii xabbaddu ay maqan tahay.
Qof deggan degmada 5 km (3 KM) ayaa u sheegay Reuters in gaaska ilmada laga dhaadhiciyay halkaas.
Ciidamada HQ iyo Agence France-Presse ayaa soo xigtay markhaatiyo iyagoo sheegay in ciidanku ay ciidamadu ku soo wareejiyeen dhismaha waxayna dhiseen boodhadhka waddooyinka agagaarka agagaarka. Ujeeddooyinka ciidanka ee ku saabsan dibad-baxa ayaan wali caddayn.
Wasiirka Warfaafinta Xasan Ismaaciil ayaa sheegay in dibadbaxayaasha ku yaala xarumaha hore ee dhismaha "si buuxda loo nadiifiyay" iyo in qalabkii amniga ahaa "isku xidhneyn oo loo adeegsaday tamar iyo isfaham la'aan".
Falanqaynta James Copnall, oo ah wariyihii hore ee BBC ee Sudan
Dawladda Suudaan waxay leedahay kooxo hubaysan oo badan iyo calaamad muujinaysa xiisad ayaa udhaxaysa iyaga.
Dibad-baxayaashu waxay ku eedeeyeen NISS iyo dibad-baxayaal. (RSF) si ay isugu dayaan in ay ka fogaadaan dhacdada. RSF waa maleeshiyaal daacad u ah madaxweynaha Bashiir, oo hore uga tirsanaa Janjaweed, dagaalyahanno lagu eedeeyay in uu galay falal badan oo ka dhacay Darfur.
Intii lagu jiray saacadihii ugu dambeeyay 48, dibadbaxayaal badan ayaa u sheegay BBC in xubno ka tirsan Ciidammada Qalabka Sida (SAF) ay ka ilaaliyeen NISS iyo RSF. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo Suudaan ah ayaa sii wadi doona inay ka shakiyaan xoogagga hubaysan sababta oo ah doorka ay ku hayaan madaxweyne Bashiir awoodda iyo dhaqankooda ku aaddan guulaha dagaallada sokeeye ee dalka.
Falanqeeyayaasha qaarkood waxay aamminsan yihiin in saraakiisha dhexe ee SAF ay la tacaalayaan dibad baxayaasha. Saraakiisha sare waxay u badan tahay inay daacad u yihiin madaxweynaha. Laakiin booska kooxaha hubaysan waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ka jira Suudaan maanta.
Sidee dhacdadani u bilaabatay?
Waxay bilowday jimcihii markii mudaaharaadayaashu ay soo degeen agagaarka bannaanka xarunta si ay uga codsadaan in shaqada laga eryo madaxweyne Bashiir iyo xukuumaddiisa.
Tani waxay ahayd mudaaharaadkii ugu weynaa ee ka soo horjeedka madaxtooyada tan iyo markii uu socday kacdoonku oo lagu soo bandhigay Diseembar wuxuuna ku calaamadiyay sannad-guuradii 34 ee dastuurka ee ka soo horjeeda xukuumaddii Madaxweyne Jaafar Nimoiri.
Madaxweyne Bashir wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg-deg ah oo la xiriirta xaalad deg deg ah bishii Febraayo
Dibadbaxayaashu waxay u muuqdaan kuwo rajeynaya in ay kufaraan gudaha gudaha, iyagoo ku amraya in ciidamada amaanka ay ka saaraan Bashir, oo muddo ku dhowaad 30 awood u ahaa, iyo in uu u hogaansamo dawlad ku meel gaar ah.
Hal qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii dhawaa - magaalada Omdurman ee magaalada Khartoum - laakiin warbaahinta bulshada ayaa soo jeedinaysa in ugu yaraan shan dibadbaxayaal ah lagu dilay.
Tan iyo bilawgii dagaalada, Human Rights Watch ayaa sheegtay in rabshad la xiriirta dilalka ay dishay dadka 51, mas'uuliyiintu waxay aamminsan yihiin in shakhsigu yahay 32, sida ay sheegtay AFP.
Maxay dadka u muujiyaan?
Dibad-baxyada ayaa markii hore ku kicitimay kor u kaca qiimaha nolosha, laakiin dibad-baxayaashu waxay hadda ku baaqayaan dhimashada madaxweynaha.
Dhaqaalaha Suudaan ayaa waxaa ku jiray xaalad kacsan illaa iyo markii Mareykanka uu ku soo rogay cunaqabateyn ka dhan ah 20 sano ka hor, isaga oo ku eedeeyay Khartoum taageerayasha kooxaha argagixisada.
Dhaqdhaqaaqa ciyaaraha lama taageerin qalabkaaga
Legend of warbaahinta Dhacdooyinka Suudaan: Maalinta labaad ee dibad baxyada Khartoum
Bishii Disembar, ayay xukuumaddu ku dhawaaqday in qiimaha baasiin iyo rooti ay kordhayaan. Sannadki sannadkii ka dib, sicir-bararka ayaa kor u kacay tan iyo markii laydhka Suudaan si deg-deg ah lumay.
Mr. Bashir ayaa jabsaday eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha. 2009 iyo 2010, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ayaa ku eedaysay xasuuq, dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. Amar lagu soo xiray ayaa la soo saaray.
Bishii Febraayo, wuxuu u muuqday in uu siiyay banaanbaxyo iyo inuu ka baxo, laakiin halkii Bashiir wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo heer qaran ah .
Waxa uu sheegay in dibad-baxayaashu ay yeesheen cabashooyin sharci ah laakiin waxa kaliya ay ahayd inay beddelaan doorashooyinka.
Waa kuwee dibad baxayaasha?
HBS - waa wada shaqeynta shaqaalaha caafimaadka iyo qareenada - waxay abaabulaan dhacdooyinka.
Legend of warbaahinta Suudaan: "Lama soo xiri doono nala joojin"
Dhakhaatiirtu waxay noqdeen ciidan hoggaamineed, sidaas darteedna ay bartilmaameedsadeen masuuliyiinta.
Waxaa lagu qiyaasay in ku dhowaad saddex daloolow laba ka mid ah dibad-baxayaashu ay yihiin dumar sheeganaya in ay muujinayaan jinsiga suudaan iyo jinsiyadda reerka.
Miyaad dhawaan ka qayb qaadatay dhacdooyinka? Nagala soo xiriir adigoo u diraya cinwaanka cinwaanka [Email ilaaliyo]
Fadlan bixi lambarka xiriirka haddii aad rabto inaad la hadasho wariye BBC. Waxaad sidoo kale nala soo xiriiri kartaa mid ka mid ah siyaabahan soo socda:
U dir sawirro / fiidiyoow [Email ilaaliyo]
Sawirradaada / fiidiyowyada ku soo daji halkan
SMS ama MMS ugu soo dir SMS 61124 ama ama at + 44 7624 800 100
Fadlan akhri noo marka la eego. isticmaalka et siyaasadda asturnaanta
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.bbc.com/news/world-africa-47850278
Dumarka uur-jiifka dumarka dumarka ah ayaa sabab u ah raali galinta isbitaalka; dacwad socota
Mo Ibrahim Foundation wuxuu difaacayaa xigeenka caadiga ah ee socdaalka Afrikaanka - JeuneAfrique.com